Izixhobo zokuqala zabaqalayo Indalo inobuhlobo kwaye ayinancasa Ikhaya elingatyibilikiyo mat
Umatshini wezemidlalo weYoga Qaphela: ukungatyibiliki sisitshixo
Yongeza isisombululo sesitokhwe serabha ukuphucula ukusebenza okungatyibiliki kwezixhobo zemveliso
I-100 anti-slip textures
I-inshurensi ephindwe kabini
Elona xesha lilungileyo lokuzenza mhle
Kwakuyiminyaka eli-10 eyadlulayo, kulandelwa ngoku
Iimpawu zemethi yomgangatho wegwebu: ubhetyebhetye obugqwesileyo, intuthuzelo kunye nokuthamba. Uyilo oluxineneyo lwenza uxinano kunye nokomelela kulungile. Ukunyanzelwa kwe-elastic kufana nokufaka izinto ezothusayo phantsi. Uyilo luxelisa ulusu lomntu. Igudile kodwa ayimtyibilizi, nto leyo ilungele abantwana ukuba bafunde ukuhamba nokukhasa. Khusela amadolo osana lwakho, thintela amaqhuma kwaye uzise ukhuseleko emntwaneni;
Ukucoca ngokulula, ukungangeni manzi kunye nokunganyamezeli amabala, nokuba kuyisuphu, iinkozo zerayisi, amabala obisi, amabala omchamo, amabala amanzi, ayizukuntywila kwaye ayinamathele, ukunciphisa ngempumelelo ukukhula kweentsholongwane, coca ngamanzi, yisebenzise kwakhona, ukonga ixesha kunye nomzamo;
Ubushushu nobushushu ubushushu, zilungele onke amaxesha onyaka, ukothuka-ubungqina, ukulahla-ubungqina, anti-skid uvimba ukufuma, ukuvala umsindo kunye nokuncitshiswa kwengxolo, imiphetho ebuthathaka kwaye akukho burrs, umdlalo wolusu-onobubele wosana;
Ithambile kwaye akukho lula ukuyilungisa, inokunqunyulwa ngokuthanda, isikwe ngokukhululekileyo, idityaniswe ngokukhululekileyo, isimahla ukusebenzisa ubuchule, iikona zinokubekwa, zikhuseleke kwaye zingabikho
Ikhuselekile kwaye inobuhlobo kwindalo, ikhululekile kwaye ihlala ixesha elide, imathiriyeli iphumelele ukuqinisekiswa kwearhente yokuhlola ukhuseleko;
Iimveliso ezithunyelwa kwamanye amazwe ziye zenziwa uhlolo olungqongqo lomgangatho ukuqinisekisa ukhuseleko kwaye zithengiswa kwihlabathi liphela, ezinjengeMelika, iJapan, iBelgium, iDenmark, iJamani, iNetherlands, iCroatia, i-Itali, i-United Kingdom namanye amazwe amaninzi.
Yonke imibala yemidlalo, musa ukukhetha isitayile esilula kunye nefashoni
Egqithileyo Amadoda nabafazi be-Yoga bandise ukwandisa ukuqalisa ekhaya okungatyibilikiyo kunye nomdaniso wokungqengqa ongathandekiyo we-yoga mat mat
Okulandelayo: Umgangatho we-foam eva floor mat Umtya oqinileyo womgangatho we-foam
U-Eva Yoga Mat
Iithayile ze-Eva Yoga
Ugqirha weYoga Mat
Ukungenelela kweYoga Mats
Iithayile zeTpe Yoga
Imethi yabantwana yepuzzle, umgangatho wegwebu ...
Kids ikhathuni ikhathuni iphazili ma ...
Evelvet velvet mat baby puzzle ikhaphethi amagwebu suede ma ...
EVA Foam Sports Mat Black Gym Mat Foam kuMgangatho Ma ...
iveliso ezifakiwe, Imephu yendawo, AMP Iselfowuni Umgangatho weMat Puzzle, Umgangatho wePuzzle wePuzzle, Umgangatho wePuzzle yePuzzle, Umgangatho wePuzzle Mat Cushion, Umgangatho wePuzzle wokuzilolonga iMat, Umgangatho wePuzzle, Zonke iiMveliso